IJAARSI GAMOO MMWO EEGALAMUUF JIRA | Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa
IJAARSI GAMOO MMWO EEGALAMUUF JIRA
Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa bara 1985 keessa sirna federaalizimii biyyattii keessatti hojiirra oole hordofuun kan hundaa’eedha. Manni Murtichaa hundeeffama isaa irraa kaasee Caffee Araaraa (6 Kiiloo)tti kan argamu gamoo suura 2ffaa irratti mul’atu keessatti tajaajila abbaa seerummaa kennaa turee jira; hojii bulchiinsaas achuma keessatti gaggeessaa tureera.
Gamoon kun turtii yeroo dheeraa irraan ka’e dulloomuun jaaree jira. Kutaaleen hojii mijaa’ina dhabuu irra darbee addunyaa biraa teellatti kan hafe ta’uu isaaf ragaan hawaasa Mana Murtichaa achitti tajaajilaa turee fi uummata Naannoo keenyaa achitti tajaajilamaa ture caalaa kan ragoomu hin jiru. Darbees kabaja Mana Murtii Waliigalaa fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa akkasumas uummata Oromoo kan madaalu miti.
Koreen Bulchiinsaa Mana Murtii Waliigalaa Oromioyaa fi hooggansi ol’aanaan yeroo sana ture seenaa kana jijjiiruuf bara 2011 keessa gamoo haaraan ammayyaa’aa ta’e kan hojii abbaa seerummaaf mijatuu fi gama kanaaniin aadaa fi eenyummaa Uummata Oromoo calaqqisiisu akka hojjatamu murtii dabarsaniin dizaayiniin suuraa 1ffaa irratti mul’atu kun hojjatamee jira. Sochiin gamoo haaraa ijaarsisuu garuu sanaan duras jalqabamee hojiiwwan akka waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa lafichaa fudhachuu faa hojjatamaa turuun osoo hin dagatamin jechuu dha.
Sana boodaas gamoon kun qulqullina ol’aanaadhaan akka hojjatamu taasisuuf murtii darbeen caalbaasiin idil addunyaa bahee dhaabbileen jajjaboon biyya alaa akka dorgoman taasifameera. Kanuma hordofuun Dhaabbanni China Railway Seventh Group jedhamu caalbaasicha injifatee Mana Murtichaa wajjin waliigaltee ijaarsaa raawwatee jira.
Guyyaa har’aa, jechuunis Onkoloolessa 9 bara 2013, Manni Murtichaa iddoo bakka bu’oonni dhaabbata gorsaa fi qaamota to’ataa ijaarsa mootummaa akkasumas bakka bu’oonni dhaabbatichaa argamanitti bakka ijaarsaa kana dhaabbatichatti dabarsee kennee (site handover taasisee) jira. Dhaabbatichis xumura torban kana irraa eegalee gara hojii ijaarsaa (bakkicha qulqulleessuu/site clearance irraa jalqabee) kan eegalu ta’a.
MUUDAMAA FI RAMADDII GARGAARTOTA AS MMA